I-china ishushu yokuthengisa imaski yonyango enomgangatho ophezulu evela kubavelisi base China mveliso kunye nabathengisi | Unyango lwe-AKF
Ukuthengisa okushushu Isigqumathelo sezonyango esilahlayo esikumgangatho ophezulu esivela e-China
Into: Imaski yotyando elahlwayo
Uhlobo: Ear-loop / Tie-on 3 layer
Isixhobo: Umaleko wangaphandle ongalukanga + 98% uyanyibilika-moya ojikelezayo
Ubukhulu: 17.5 * 9.5cm
Umbala: Luhlaza, Mhlophe
Isicelo: Isetyenziswa ngokubanzi esibhedlele kunye nokunakekelwa kwezempilo, ukumanyaniswa kwezonyango kunye neparmacy, isaluni yobuhle, ukulungiswa kokutya, ukhuseleko kwimizi-mveliso, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla njl.
Ukupakisha: iiPC ezingama-50 kwibhokisi yesipho; Iifayile ezingama-2000 kwibhokisi yebhokisi nganye
Isigqumathelo esilahlwayo esilahlwayo senziwe ngamanqanaba ama-3 omaleko ongaphandle ongalukwanga, i-98% inyibilike-umoya ophefumlelweyo kunye nophahla lwangaphakathi olungalukanga olunobungqingqwa obuphezulu be-hypoallergenic ethintela ulusu okanye iingxaki zokungabikho komzimba. Imveliso iyahambelana nomgangatho we-EN14683 wohlobo lwe-II.
Akukho kucaphukisa kunye nokuphefumla ngokulula Ukusebenza kokucoca kwebacteria okuphezulu.
Ithambile kunye neNtuthuzelo yeNdlebe
I-3.Izinto zokumamela indlebe zenziwe ngeLatex yasimahla ye-Lycra elastic evula ngomlinganiso we-1: 2 yenza kube lula ukunxiba nokususa ngentuthuzelo.
4.Ucingo lwempumlo oluthambileyo lujija ngokukhululekileyo, lufanele ibhulorho yempumlo nobuso.
Umaleko 1.Three khusela: Non-ephothiweyo umaleko engaphandle + 98% enyibilikayo-umaleko ovuthuzayo + ulusu-friendly non-ephothiweyo umaleko ngaphakathi, intuthuzelo ukuphefumla, ukumelana ephantsi yokuphefumla.
2. Isicu sebhulorho seplastikhi, Fihla amacala empumlo.
3.High-elastic umtya tyaba indlebe. Awuyi kuziqinisa iindlebe.
Maleko 4.Inner: ulusu-friendly Non-ephothiweyo, ethambileyo kwaye bekhululekile, ukunciphisa amathuba ulusu komzimba.
5.Physical cuke welding.Encrypted welding point.Strong kwaye ixesha elide.Fine umsebenzi
6. Thintela ukusasazeka kwegazi
1. Le mveliso inikwe umda kusetyenziso lwexesha elinye kunye nokutshatyalaliswa emva kokusetyenziswa;
2. Jonga ukuba isigqubuthelo sobuso sihamba kakuhle na;
3. Imaski kufuneka itshintshwe ngexesha. Akukhuthazwa ukuba uyisebenzise ixesha elide, kuyacetyiswa ukuba uyisebenzise iiyure ezingama-4;
4. Ukuba ukungaphatheki kakuhle okanye iimpendulo ezigwenxa zenzeka ngexesha lokunxiba, kuyacetyiswa ukuba uyeke ukuwusebenzisa;
5. Imveliso kufuneka igcinwe kwindawo eyomileyo, engenisa umoya, engenakonakala kwirhasi;
6. Esebenzayo yiminyaka emi-2, nceda uyisebenzise ngexesha elifanelekileyo.
Egqithileyo Iiglavu ezilahlwayo zilahlwe Latex Ukucoca Ukutya Iziqhano
Okulandelayo: Ukuthengisa okushisayo kwe-3-layer bandage face mask elahlwayo yobuso buso kwezonyango
Ukuthengisa okushushu kwe-3-layer bandage face mask disposabl ...